Accueil > Gazetin'ny nosy > Orinasa Kraoma : Nisy nanodina ny karaman’ny mpiasa enim-bolana
Orinasa Kraoma : Nisy nanodina ny karaman’ny mpiasa enim-bolana
Namoaka vola nandoavana ny karaman’ny mpiasan’ny Kraoma mandritra ny roa volana indray ny fitondram-panjakana ny herinandro lasa teo. Akory ny hatairan’ny maro fa nisy « mpiasa » izay nahasahy namoaka fanambarana nandoavam-bola be tamin’ny gazety (communiqué payant) izay maneho fisaorana ny filohampirenena fa hoe « voaray ny karama rioa volana ». Ao anatin’io fanambarana io koa no isaoran’izy ireo ny hoe « naharaisana ny karama tamin’ny 2020 ». Izany hoe efa tafiditra ho isan’ny karama amin’ity taona 2021 ity izany io roa volana teo io.
Ny famoahana fanambarana nandoavam-bola toa ireny aloha dia mibaribary fa fanaovana kilalao ny mpiasa. Mpiasa tsy nandray karama an-taonany ve ka zara nomena volana roa dia hanam-piniavana handoa vola hamoahana fanambarana an-gazety andoavam-bola ? Ny marina dia ny “lehibe” ao amin’ny Kraoma no nanao an’ireny fanambarana andoavam-bola tamin’ny gazety ireny ka mba hilany dera manokana amin’ny filohampirenena dia mody nataony tamin’ny anaran’ny mpiasa.
Isan’ny nanaitra ny mpiasan’ny kraoma koa anefa ny hoe “voaray ny karama taona 2020’. Oviana sy taiza no nisy an’izany, hoy ny mpiasa fa hatramin’ny volana desambra 2019 no tsy nandray karama, dia mba nisy telo volana tamin’ny faramparan’ny taona 2020 na fiandohan’ny taona 2021, dia izao indray vao nisy an’io roa volana io. Tamin’io telo volana teo aloha io aza, nisy ny tsy nandray mihitsy ny tambin-jony. Tao ny nandray fa ampahany, ary nitohy tamin’ity roa volana tamin’ny herinandro lasa teo ity io tsy fandraisan’ny sasany na ariary aza na ny ampahany ihany no nisitrahan’ny sasany.
Raha izany no fandehany, hoy hatrany ny mpiasan’ny Kraoma; dia mety efa nomen’ny filohampirenena ny karama nandritra ny taona 2020 fa nahodin-dry zalahy “lehibe” ka nilaza tsy nanontaniana izy aty amin’ny volana jona 2021 fa “voaray ny karama 2020”. Tokony mampanao fanadihadiana momba an’io ny filohampirenena fa misy kimaizimaizina sy tsy fanajana ny fahamarinana ao.
Etsy ankilany, toa nentina nanjonoana ny mpiasa hiverina hiasa io karama farany teo io, saingy hentitra ny mpiasa fa “tsy mandeha goanna toa izany ny fiverenana miasa fa misy fepetra sy lamina tsy maintsy toavina”.
Tokony misy fanadihadiana atao koa ao amin’ity orinasam-panjakana ity aloha satria nisy fitaovana nahodin’ny “lehibe” ary nisy vokatra kraomita nampanalain’ny “lehibe” antsokosoko, an koatry ny vaky trano voarindra nikatsahana tombontsoan’olom-bitsy manokana na nitetehana hanotofana marina.